‘’Xisbiga Waddani Haddii uu Is Macaashsiiyo Madax-Wareer ayaa Ku Dhici Doona’’ Wasiirkii Hore ee Maaliyadda Mudane Samaale | Somalidiasporanews.com
12:23 pm | Posted by Hargeysa
‘’Xisbiga Waddani Haddii uu Is Macaashsiiyo Madax-Wareer ayaa Ku Dhici Doona’’ Wasiirkii Hore ee Maaliyadda Mudane Samaale
Hargaysa 12. August 2017 (SDN/QJ):- Wasiirkii hore ee Maaliyadda Somaliland, C/casiis Maxamed Samaale, ayaa ugu baaqay xildhibaan C/raxmaan Talyanle in uu ku adkaysto go’aankiisii uu markii hore ku aqbalay in Baashe Maxamed Faarax, uu kaga guulaystay xilka guddoomiyenimo ee Wakiillada.
Waxa kaloo uu kula taliyay xildhibaan Talyanle, in guul-darada uu aqbalo ay macnaheedu tahay in uu guulaystay, isla markaana haddii uu diido guul-daradda in aanu qofku geesi ahayn.
C/casiis Maxamed Samaale, waxa uu sidaas ka sheegay hadal uu shalay ka jeediyay magaaladda Berbera, isagoo ka mid ah wefti ballaadhan oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga KULMIYE oo maalmahan socdaal ku maraya degaanno ka tirsan gobolka Saaxil.
“Tartanku-na wuu hawl badan yahay, waanu qadhaadh yahay, guul-daradda in aad aqbashaa guusha ayay ka mid tahay. Haddii aad aqbali waydana ma tihid geesi. tartan ayaa imanaya waa la kala badinayaa xaq iyo xaq-daraba cida kaa badisa waa in aad u hambalyayso sidii uu xildhibaan Tayanle u hambalyeeyay in uu ku daysto ayay ahayd,”ayuu yidhi Mr.Samaale
Geesta kale Cabdicasiis Samaale, ayaa ka hadlay in xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI uu quudhsado xisbiga kale ee UCID oo ay ku tilmaamaan in laba xisbi oo qudha ay tartamayaan.Waxaannu sheegay in aan la yaraysan karin xisbiga UCID, isla markaana uu yahay xisbi qaran oo la tartamaya xisbiyadda KULMIYE iyo WADDANI. Isagoo kula taliyay xisbiga WADDANI in haddii aanu samaynin dedaal uu ku hananayo bulshadda si ay ugu codeeyaan in aanu guulaysan Karin.
Waxaanu yidhi“Ma tartamayaan xisbiyadda KULMIYE iyo WADDANI oo keliya, ayaan la yaraysanin Faysal Cali Waraabe iyo xisbiga UCID sidaas ayaan leeyahay. Waxa tartamaya saddex xisbi qaran, dadka ayaana codaynaya waa gef in aad tidhaahdo laba xisbi ayaa tartamaya, mararka qaar koodna meel aanad filan ayay guushu ka timaadaa”.
Sidoo kale C/casiis Samaale, ayaa tilmaamay in xisbiga WADDANI uu waxyaabo been ah isku maaweeliyo, isla markaana aanu talada ku darsan in laga guulaysto taasi oo keeni karta in madax-wareer ku dhaco haddii uu guul-daraysto; “Waxaanan leeyahay tartanka lama yaraysto, haddii aad yaraysato waxa dhici karta in wax aanad filayni kaaga soo baxaan. Waana in aad ku tallo-gashaa in tartan adag aad gasho oo codka si adag u raadiso oo cid walba codka ka raadiso oo Geed walba aad hoos fadhiisato. Sidaas ayuu KULMIYE codka ku doonayaa. KULMIYE xisbi mucaarid ah oo adag ayuu ahaa, WADDANI oo cusub oo muddo kooban jiray haddii uu isa sii macaashsiiyo dadka qaarkood been u sheegaan, madax-wareer ayaa ku dhici doona. Annagu caytami mayno qofka caytamaana isaga ayaa dadka iska eryaya,”ayuu yidhi Cabdicasiis Samaale.